Kuuriyada Waqooyi oo Tijaabisay Bambaanada Nuliyeerka | shumis.net
Home » News » Kuuriyada Waqooyi oo Tijaabisay Bambaanada Nuliyeerka
Kuuriyada Waqooyi oo Tijaabisay Bambaanada Nuliyeerka
Dowlada Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta oo Arbaca ah shaacisay inay tijaabisay bambaanadii 4aad ee hubka Nukliyeerka, arrintan oo ay si weyn u cambaareeyeen dalalka jaarka la ah iyo Beesha Caalamka.
Tijaabada bambaanadan nukliyeerka ah nooca loo yaqaan (Hydrogen bomb) ayaa ah bambaanadii ugu awooda badneyd oo uu dalkaasi Sameeyo. Wadanka Kuuriyada Waqooyi ayaa horey sadex mar usoo tijaabiyey bambaanooyinka nukliyeerka sanadihii 2006, 2009 iyo 2013.
Dhamaan tijaabooyinkii hore iyo kan ugu danbeeyey ayaa ka dhacay deegaanka Punggye-ri oo ku yaal waqooyiga wadankaasi, goobtaasi oo laga dareemay dhul-gariir ka yimid tijaabada bambaanadaasi.
(…Hubka Nukliyeerka ee aan ku guuleysanay waa mid aan isaga difaacayno Daan-Daansiga iyo duulaan nooga yimaada dhanka Wadanka Maraykanka…) ayaa lagu yiri warbixinta kasoo baxday Xukuumada Kuuriyada Waqooyi.
Dalka Kuuriyada Waqooyi oo horey ugu guuleystay sameynta gantaalada Xambaari kara Nukliyeerka iyo Bambaanada nuliyerka, ayaa doonaya inuu ku guuleysto farsameynta inuu sameeyo bambaano yar oo Nukliyeer ah oo la saari karo Gantaalada ay sameeyaan taasi oo aysan weli ku guuleysan sida ay sheegayaan khubarada caalamka.
Hase yeeshee tijaabadan ugu danbeysay ayaa ah mid muujineysa in wadankaasi uu horumar weyn uu ka sameeyey dhanka cilmiga sameynta hubka Nukliyeerka.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sidoo kale markii ugu horeysay Satellite hawada sare u dirtay sanadkii 2012, tilaabooyinkan oo ah mid ay sare ugu qaadayaan awoodooda militari.
Dalalka Jaarka la ah Kuuriyada Waqooyi, sida Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si adag u cambaareeyey tijaabadan iyagoo sheegay in Beesha Caalamka looga baahan yahay inay tilaabo ka qaado dalkaasi oo ka dhego adeegay baaqyo iyo go’aano horey uga soo baxay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay.
Title: Kuuriyada Waqooyi oo Tijaabisay Bambaanada Nuliyeerka